Iqela laseLufthansa lithenga iinqwelomoya ezili-10 ezisebenza ngokude kakhulu
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iqela laseLufthansa lithenga iinqwelomoya ezili-10 ezisebenza ngokude kakhulu
Airlines • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Utyalo mali • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Intetho yezoKhenketho • uthutho • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Ngamana 3, 2021
Iqela laseLufthansa liqhubela phambili nokuphuculwa kweenqanawa, lityale imali kakhulu kwiiplanethi ezintsha
Iqela laseLufthansa libhengeza ukuthengwa kwee-Airbus A350-900s ezintlanu kunye neenqwelomoya ezintlanu zeBoeing 787-9
Iinqwelomoya zinegalelo elikhulu ekomelezeni uzinzo ngokunciphisa ukusetyenziswa kwepetroli kunye nokukhutshwa kwekhabhoni ngepesenti ezingama-30
Izithuthi zeqela laseLufthansa: zincinci iintlobo zeenqwelomoya, ukusebenza ngakumbi
Iqela leLufthansa ibalekisa ukuphuculwa kwezithuthi zayo. Iinqwelomoya ezintsha, ezixabisa kakhulu kwaye ezonga amafutha zithatha indawo yeendidi ezindala kwiindlela ezimfutshane, eziphakathi nezide. Ngenxa yoko, iBhodi eLawulayo yeDeutsche Lufthansa AG yathatha isigqibo sokuthenga iinqwelomoya ezilishumi ezinde: iiAirbus A350-900s ezintlanu kunye neBoeing B787-9. IBhodi yoLawulo ivumile ukuthengwa namhlanje. Ezi nqwelomoya ziya kuqhutywa yiLufthansa Airline kwaye yomeleze inkokhelo ye-premium yeenkwenkwezi ezi-5 zohlobo lweQela.
Njengenxalenye yenkqubo ekudala ikho yokuhlaziya izithuthi, zizonke i-175 zeenqwelo moya ezintsha ziya kusiwa kwiinqwelomoya zeLufthansa Group kule minyaka ilishumi.
UCarsten Spohr, uSihlalo weBhodi yesiGqeba kunye ne-CEO ye Deutsche Lufthansa AG, wathi:
“Kula maxesha anzima, siyaqhubeka nokutyala imali kwizithuthi zala maxesha, ezisebenza ngokukuko kunye neqela eliphantsi leLufthansa Group. Kwangelo xesha, sityhalela phambili nokuphuculwa kweenqwelo-moya zethu ezinde ngokukhawuleza nangaphezulu kunokuba bekucwangcisiwe ngaphambi kobhubhane we-coronavirus ngenxa yamathuba okubulala. Iinqwelomoya ezintsha zezona zanamhlanje. Sifuna ukwandisa indima yethu kubunkokheli behlabathi, phakathi kwezinye izinto, ngeemveliso zepremiyamu ezinqabileyo kunye nenqwelomoya yezobugcisa - ngakumbi kuba sinoxanduva kwindalo esingqongileyo. ”
Eyokuqala iBoeing I-787-9 icwangciselwe ukubhabha eLufthansa kwangoko ebusika, kunye nabanye ukuba balandele kwisiqingatha sokuqala sika-2022. Isigqibo sanamhlanje sizisa inani elipheleleyo lee-odolo zeBoeing 787-9s kunye neBoeing 777-9s ukuya kwiinqwelomoya ezingama-45.
Ngenxa yefuthe elibonakalayo lobhubhane we-coronavirus kubuchwephesha beenqwelomoya kwihlabathi liphela, iinqwelomoya ebezi-odolwe zezinye iinqwelomoya azikwazanga ukuhanjiswa kwiinyanga ezilishumi elinambini ezidlulileyo. ILufthansa ibibambe iingxoxo neBoeing kwaye yafumana indlela yokuthenga ezintlanu ezingama-787-9 ezazisele zenziwe. Kwangelo xesha, iQela lafikelela kwisivumelwano kunye neBoeing kwisicwangciso sokuhanjiswa kohlengahlengiso.
I-Airline e-China ibona ukubuyiswa okuzinzileyo